Medical Sales Executive | CAG Engineering Co.,Ltd
CAG Engineering Co.,Ltd
-	မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် ဆေးပညာလောကဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ခေတ်မီနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသုံး ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုဆိုင်ရာ၊ ပုံရိပ်ဖမ်းနည်းပညာ ဆိုင်ရာ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို တင်သွင်းဖြန့်ချီလျှက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် ၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
-	အထက်ပါပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်အတွက် အရောင်းစွမ်းရည်နှင့် စိတ်ဓါတ်နှင့်အရည်အချင်းမြင့်မား၍ စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
-	မိမိလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်သည့်Customer အသစ်များရှာဖွေ၍Appointments များချိန်းဆိုပြီး မိမိပစ္စည်းများကို သွားရောက်ရောင်းချနိုင်ရမည်။
-	ရှိပြီးသားCustomerများနှင့် ကောင်းမွန်သော Relationship ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမည်။
-	မိမိ Sales Performance ကို အမြဲတစေ Review ပြုလုပ်ပြီး ၊ ချမှတ်ထားသော Sales Target ကိုပြည့်မီအောင် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အရည်အချင်းပြည့်မီဝန်ထမ်းများလိုအပ်သည်။
-	အဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် trade exhibitions, conferences and meetings များကိုတက်ရောက်ရမည်။
-	မိမိနှင့်ပတ်သတ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းနိုင်ရမည်။ လိုအပ်၍တောင်းပါက ချက်ချင်းပေးနိုင်ရမည်။
-	Weekly Report / Monthly Report များပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Management သို့တင်ပြရမည်။
-	အခြားသက်ဆိုင်ရာ JD များကို Management မှလိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလိုပေးပါက တာဝန်ယူပေးရမည်။
-	MBBS, BDS, B-Pharm, BN.Sc, B.Med.Tech ဘွဲ့ရထားသူဖြစ်ရမည်။
-	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ရှိရပါမည်။
-	English4Skill ကောင်းမွန်ရမည်။
-	Business and Marketing Management Diploma (or) Degree ရရှိထားသူများနှင့်ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။
-	ဖော်ရွေသောစိတ်နေစိတ်ထားနှင့် ယဉ်ကျေးသော ကိုယ်ဟန်အမူအယာ ရှိသူများကိုသာဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
-	အချိန်မရွေး ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးများသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
-	ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မှုမြင့်မားပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မိမိမှစ၍ဦးဆောင်ကာ ရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ များဖြစ်ရပါမည်။
-	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သင်တန်းများပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
-	အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ ကောင်းမွန်သောလစာ ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
* Sat, Sun Off
CAG ENGINEERING CO.,LTD. has been established in Myanmar to participate in Water and Waste Water Treatment System , Building instruments andawide-range of control instrument field , inside and outside Myanmar.
Medical Sales Executive SCT COMPANY LIMITED Sales & Marketing Executive AGB Communication Co. Ltd Senior Sales Executive Singapore Myanmar Investco Senior Field Sales Executive (Sittwe) Nestle Myanmar Sales Executive - Project Decorative Jotun Myanmar Co.,Ltd Sales And Marketing Executive Authentic Group Senior Field Sales Executive (Teashop Channel) Nestle Myanmar Medical Sales Representative (Sittwe) DKSH ( Myanmar ) Ltd. Medical Sales Representative (Bago) DKSH ( Myanmar ) Ltd. Digital Sales Account Executive Myanmar Consolidated Media Ltd. Sales Executive (Automotive) Male Only Greater Man Group of Companies Sales & Marketing Executive Enchant Luxury Furniture Myanmar Sales Executive (Lashio) Myanmar Carlsberg Co., Ltd.